ChiGerman, Gungano reVamiriri
Mukati mehutano hwemamiriro ezvinhu wamunogamuchira munharaunda iyi; pabonde zirokwazvo venhema, kutsausa, zvisiri pamutemo sangano, crusher, vanotyora pachake toga kodzero, mutemo dzakawanda uye Mutemo of Zimbabwe Turkey \_ 's kwete kutumira mashoko pamwe kugutsikana nemitemo. Mukuwedzera, mafaira ane kodzero uye nezvimwewo. zvigadzirwa. Spam, mafashamo, kushambadzira, tsamba dzetani, kushambadza boka uye kushungurudzwa zvakanyatsorambidzwa.
Iwe unofanirwa kuziva kuti hazvibviri kune muridzi kana mutungamiri wei forum kuti aongorore uye agone kuvimbika kwezvakaiswa zviri mukati. Ndapota cherechedzai izvozvo; isu hatikwanisi kutarisa meseji yese yakarasikirwa pakarepo, uye zvinyorwa zvemashoko hazvisi basa redu. Hatigoni kuvimbisa kuti chero ruzivo rwakagoverwa / rwakapiwa runobatsira kana rwakawedzerwa. Kutumwa mameseji kunongoratidzira maonero emunyori; kwete maonero emusangano, timu ye forum, vashandi, kana mutevedzeri wemusangano. Kana iwe uchinzwa kuti shoko rakatumirwa haritenderwi, zivisa maneja kana mutungamiriri panguva iyoyo. Vadzidzisi vekambani uye neboka vane kodzero yekuita zvisarudzo munguva yakafanira yekubvisa zvinyorwa zvinonzi hazvitenderwi. Ndapota cherechedza kuti izvi zvingave zvisingabviri kugadziriswa pakarepo kana kusarudzwa kwemashoko, sezvo iri iri bhuku rinoshanda zvachose. Izvozvi zvinoshandawo kune nhengo yehuwandu hwemashoko.
Iwe uchave uine mhosva pamusoro pemashoko awakanyora. Mukuwedzera, unobvumirana kuti usakuvadza kana kuchengetedza iyi forum, mamwe mawebsite, timu yebhuku remusangano uye vashandi vanobatanidzwa neforamu kubva pane zvinokuvadza. Vatenzi vemu forum vanochengetedza kodzero yekuzarura chizivo chako (kuwedzera, chero humwe ruzivo rwakagadzirirwa pamusoro pako kana uchishandisa basa iri) kana rakagamuchira runyunyuta rwepamutemo kana kuti mutemo wezvemitemo inodaro nemhaka yemashandisiro ako emusangano.
Iwe unopiwa rusununguko rwokusarudza zita rekushandisa panguva yekunyora. Tinokurudzira kuti zita rako rive rakasiyana newe uye rakanaka. Unobvumirana kuti usapiwe password yebhuku rako rekushandisa iwe raunenge uchinyoresa kune ani zvake kunze kwomutungamiriri wekuchengeteka nechinangwa chekuvimbisa kana zvichidiwa. Zvisinei, iwe unobvumiranawo kuti usashandise imwe nhoroondo yevashandi. Nokuda kwekuchengeteka kweakaunti yako, tinokurudzira kushandisa mazita ekushandisa akaoma uye akasiyana.
Pashure pokunyora uye kupinda mukati nephasiwedi yako, uchakwanisa kuisa yako tsanangudzo zvakadzama. Ndiro mutoro wako kupa mashoko akajeka uye asingagumi. Kana vatungamiri venhandare vakaona kusawirirana kana mamiriro ezvinhu asina kunaka mune ruzivo rwaunopa, vanogona kuchinja ruzivo rwenyu kuti vagadzirise navo kana kuti vasina kunyeverwa. Muchiitiko ichi, zvimwe zvipikiso zvinogona kushanda.
Iwe unofanirwa kuziva kuti IP yako kero yakanyorwa nemashoko ose anotumira. Mashoko aya anogona kushandiswa kana uchida kudzivirirwa kubva pakusvika ku forum kana kuti utaure neIPI yako. Izvi zvinogona kuitika kana iwe ukakanganisa chikamu chinokosha chechibvumirano ichi.
Cherechedza: Iyo mapurisa epurogiramu inochengetedza rugwaro rwemavara runonzi cookie muchechi ye browser yako ine zvinyorwa zvishoma pamusoro pako, zvakadai sezita rako rekushandisa uye password. Iyi mashoko inoshandiswa PAMUNYU chete yekutumira nekutumira. Iyo software haigamuchiri data kubva komutombiyuta yako mune imwe mimwe mapepa kunze kwezivo iyi uye haitumi ruzivo rwekombiyuta yako.